ဆင်းရဲလွန်းတဲ့ မိသားစု ၃ စုအတွက် အရင်းအနှီး ကူညီပေးခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ – Thutastar
Comments Off on ဆင်းရဲလွန်းတဲ့ မိသားစု ၃ စုအတွက် အရင်းအနှီး ကူညီပေးခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
သရုပ်ဆောင် ခိုင်နှင်းဝေတစ်ယောက်ကတော့ ဆင်းရဲလွန်းတဲ့ မိသားစု ၃ စုအတွက် အရင်းအနှီးအချို့ထုတ်ပေးပြီး ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီနေ့ ကျရောက်လာတဲ့ သူမရဲ့ ၃၇ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့နဲ့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ မျက်ရည်ကျနေတဲ့ ဓာတ်ပုံအချို့နဲ့အတူ ဒီလိုဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်း သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွက်စာမျက်နှာမှာ တင်ထားပါတယ်။
ဒီ နေ့ကျမရဲ့ မွေး နေ့မှာ သက် ငယ် မုဒိမ်းများအတွက် ကြီးလး သောပြစ် ဒဏ် ချမှတ် ပေးနိုင် ရန် လွှတ် တော် မှာ တောင်းဆိုဖို့ ရောက် ရှိ နေတဲ့အတွက် မ နေ့က မွေး နေ့အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် လုပ် ကိုင် စား သောက် ဖို့အခက် အခဲဖြစ် နေ သော တစ် ရက် ကိုမှ၃ထောင် လောက် ရဖို့ကိုပင် ပန်းဆင်းရဲစွာရှာ ဖွေ နေရတဲ့ အိမ် ထောင် စု ၃စုအတွက် သူတို့လုပ် ချင် တဲ့ စီးပွား ရေး လေး တွေလုပ် နိုင် ဖို့ အစမှအဆုံး အရင်းအနှီး ပြုလုပ် ပေးဖြစ် ခဲ့ပါတယ် . တစ် မိသားစုခြင်းစီရဲ့အ ကြောင်းကိုလဲထပ် ပြီးpostတင် ပေးပါ့မယ် ရှင် ဆိုပြီး ရေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရဟိတအလုပ်တွေကို နာမည်ကြီးဖို့အတွက်လုပ်နေတာမဟုတ်ပဲ လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကို အချိန်မရွေးပဲ အင်အားရှိသလောက် အစွမ်းကုန်လုပ်နေတဲ့အတွက် ခိုင်နှင်းဝေကို အားပေးထောက်ခံသူတွေလည်း များလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်တစ်ဖက်နဲ့ ပရဟိတလုပ်နေတဲ့သူမကို ပရဟိတမင်းသမီးလို့လည်း အသိအမှတ်ပြုလာကြပါတယ်။
သရုပျဆောငျ ခိုငျနှငျးဝတေဈယောကျကတော့ ဆငျးရဲလှနျးတဲ့ မိသားစု ၃ စုအတှကျ အရငျးအနှီးအခြို့ထုတျပေးပွီး ကူညီစောငျ့ရှောကျပေးခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။ ဒီနေ့ ကရြောကျလာတဲ့ သူမရဲ့ ၃၇ နှဈပွညျ့မှေးနနေဲ့ တိုကျတိုကျဆိုငျဆိုငျပဲ မကျြရညျကနြတေဲ့ ဓာတျပုံအခြို့နဲ့အတူ ဒီလိုဆုံးဖွတျလိုကျကွောငျး သူမရဲ့ ဖစျေ့ဘှကျစာမကျြနှာမှာ တငျထားပါတယျ။
ဒီ နကေ့မြရဲ့ မှေး နမှေ့ာ သကျ ငယျ မုဒိမျးမြားအတှကျ ကွီးလး သောပွဈ ဒဏျ ခမြှတျ ပေးနိုငျ ရနျ လှတျ တျော မှာ တောငျးဆိုဖို့ ရောကျ ရှိ နတေဲ့အတှကျ မ နကေ့ မှေး နအေ့ထိမျးအမှတျ အဖွဈ လုပျ ကိုငျ စား သောကျ ဖို့အခကျ အခဲဖွဈ နေ သော တဈ ရကျ ကိုမှ၃ထောငျ လောကျ ရဖို့ကိုပငျ ပနျးဆငျးရဲစှာရှာ ဖှေ နရေတဲ့ အိမျ ထောငျ စု ၃စုအတှကျ သူတို့လုပျ ခငျြ တဲ့ စီးပှား ရေး လေး တှလေုပျ နိုငျ ဖို့ အစမှအဆုံး အရငျးအနှီး ပွုလုပျ ပေးဖွဈ ခဲ့ပါတယျ . တဈ မိသားစုခွငျးစီရဲ့အ ကွောငျးကိုလဲထပျ ပွီးpostတငျ ပေးပါ့မယျ ရှငျ ဆိုပွီး ရေးထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ပရဟိတအလုပျတှကေို နာမညျကွီးဖို့အတှကျလုပျနတောမဟုတျပဲ လိုအပျတဲ့နရောတှကေို အခြိနျမရှေးပဲ အငျအားရှိသလောကျ အစှမျးကုနျလုပျနတေဲ့အတှကျ ခိုငျနှငျးဝကေို အားပေးထောကျခံသူတှလေညျး မြားလာပွီဖွဈပါတယျ။ သရုပျဆောငျတဈဖကျနဲ့ ပရဟိတလုပျနတေဲ့သူမကို ပရဟိတမငျးသမီးလို့လညျး အသိအမှတျပွုလာကွပါတယျ။
အားပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကိုလည်း အနမ်းပေးလိုက်တဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး
Comments Off on အားပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကိုလည်း အနမ်းပေးလိုက်တဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး
Comments Off on ကွယ်​လွန်​သွား​ပြီးဖြစ်​တဲ့ ဖခင်​ကို သတိရ​ကြောင်း​ပြောပြလာတဲ့ လူကြမ်းသရုပ်ဆောင် နိုင်လူ
Comments Off on ” သမီးလေးကြောင့် တစ်အိမ်သားလုံး လွမ်းကျန်ရစ်ခဲ့ရတဲ့ လင်းဇာနည်ဇော်တို့မိသားစု”
“ရိုင်းစိုင်းတဲ့ အကောင့်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးကို မှတ်လောက်သားလောက်အောင် ပညာပေးလိုက်တဲ့ နေဒွေး”
Comments Off on “ရိုင်းစိုင်းတဲ့ အကောင့်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးကို မှတ်လောက်သားလောက်အောင် ပညာပေးလိုက်တဲ့ နေဒွေး”
ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေအတွက် ဈေးရောင်းပြီး ငွေရှာနေတဲ့ သရုပ်ဆောင် ခိုင်နှင်းဝေ
Comments Off on ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေအတွက် ဈေးရောင်းပြီး ငွေရှာနေတဲ့ သရုပ်ဆောင် ခိုင်နှင်းဝေ
ယွန်းယွန်းလေးရဲ့ (၁၈)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ
Comments Off on ယွန်းယွန်းလေးရဲ့ (၁၈)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ
Comments Off on အချစ်ကြီးတဲ့အကြောင်းဖွင့်ပြောလာတဲ့ ရွှေမှုန်ရတီ
Comments Off on ကန့်လန့်ကာ နောက်ကွယ်က ဇေရဲထက် နဲ့ ခင်ဇာခြည်ကျော်
Comments Off on စိုးမြတ်နန္ဒာ တစ်ယောက် ဘာ့ကြောင့်ပိန်သွားရသလဲ
ရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူဖို့ သိန်း(၂၀) လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ စမိုင်းလ်တို့မိသားစု
Comments Off on ရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူဖို့ သိန်း(၂၀) လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ စမိုင်းလ်တို့မိသားစု
ပိုက်ဆံလိုရင် လာအလှူခံလည်း ရပါတယ်လို့ ဒဲ့ပြောလိုက်တဲ့ စံရတီမိုးမြင့်
Comments Off on ပိုက်ဆံလိုရင် လာအလှူခံလည်း ရပါတယ်လို့ ဒဲ့ပြောလိုက်တဲ့ စံရတီမိုးမြင့်
နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းတက်နေတဲ့ သားဖြစ်သူ မင်းသန့်မောင်မောင် အတွက် ရေးထားတဲ့ ဇင်ရော်မောင်မောင်ရဲ့ စာ.